कांग्रेसलाई ओलीको व्यंग्य-‘नातीले किन विरोध गर्नुभयो बाजेबज्यै भनेर सोध्लान् है ’ – Everest Dainik – News from Nepal
कांग्रेसलाई ओलीको व्यंग्य-‘नातीले किन विरोध गर्नुभयो बाजेबज्यै भनेर सोध्लान् है ’
काठमाडौं, साउन ९ । प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले विकास निर्माणका काममा विरोध गरेको आरोप लगाएका छन् । प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टरले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा राखेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले यस्तो अरोप लगाएका हुन् ।
विकास निर्माण गर्छौं, रेल ल्याउँछौँ, पानीजहाज चलाउँछौँ भन्दा किन आपत्ति गर्नुप‍र्यो ? यसरी सरकारले विकास गर्छु भन्दा विरोध गर्ने हो भने भोलिका पुस्ताले किन पहिला विरोध गर्नुभयो बाजे बज्यै भनेर सोध्लान् नि । मैले नै देशबाट तुइन विस्थापित गर्नुपर्छ भनेर तीन वर्षअघि सुरु गरेको हो । अब तुइन बनाइने छैन । भएका तुइन पनि विस्थापित गरिनेछ । तुइनको ठाउँमा झुलेंगे र पक्की पुल बनाइनेछ । अब तुइनको घिर्नीले च्यापेर, डोरी चुँडिएर कोही मर्ने छैनन् ।
बिरामी भएर अस्पताल जाँदा उपचार गर्दिंनँ भन्ने कुरा कति मानवीय हुन्छ ? आज उपचार गर्दिनँ भोलि उपचार गर्छु भन्दा बिरामी मर्दैन ? भोलि उपचार गर्छु भन्न मिल्छ ? आज स्लाइन चढाइरहेको बिरामी थप उपचार पाएन भने के हुन्छ ? अरू औषधि चाहिने बिरामीलाई के गर्ने ? यस्ता विषयमा संवेदनशील हुनुपर्छ कि पर्दैन ? एप्रोन लगाएर कुनै पार्टीको पछाडि लागेर सडकमा जाँदा पनि किञ्चित छैन ।
उहाँहरूले माग राख्नुपर्छ, कुरा राख्नुपर्छ । तर, कुन ठाउँमा हडताल गर्ने भन्ने विषयमा ख्याल गर्नु पर्दैन ? जुम्लाको अस्पतालले लेखेर दियो । डा. केसीको स्वास्थ्य कुनै पनि वेला बिग्रन सक्छ । यसो हुँदा यहाँ आइसियु छैन, आइसियु हुने ठाउँमा केसीलाई लानुपर्ने हुन्छ । प्रहरीले बल प्रयोग गरेर केसीलाई बचाउन काठमाडौं ल्यायो । सुविधासम्पन्न अस्पतालमा ल्याउन नदिने, गोली चलायो भनेर हल्ला गर्ने, हल्ला गर्ने डाक्टरलाई काठमाडौं लगेर बचाउन पाइँदैन भन्ने ? नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
ट्याग्स: cpn, pm kp oli, प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली